Soo dejisan Spencer 1.24 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Spencer
Spencer – menu bilaabanayo style of Windows XP, kaas oo si buuxda ugu waafaqsan hababka cusub Windows. Software wuxuu siiyaa fursad fudud oo ay ku heli karaan qalabka maamulka iyo goobaha guud ee kombuyuutarka. Isticmaalidda Spencer, waxaad ku wadi kartaa adeegga qaybta, dab-demiska, xariijinta taliska, baadigoobka, guddiga xakamaynta, buug-yaraha, cayaaraha caadiga ah, iwm. Spencer ayaa kuu ogolaaneysa inaad ku darto barnaamijka lagama maarmaanka ah ama qalabka kala duwan ee nidaamka qalliinka si aad u hesho liiska barnaamijka si dhakhso ah u helaan iyaga oo u maraya menu bilaabmaya. Spencer sidoo kale ma khilaafin menu Default Start, kaas oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho labada button labada isku mid ah.
Ma faragalinayo liiska classic ee Windows 10, 8
Ku darida walxaha nidaamka lagama maarmaanka u ah menu
Waxaa lagu lifaaqi karaa hawsha
Fudud oo si fudud loo gaarsiin karo xuduudaha aasaasiga ah iyo fursadaha OS
Soo dejisan Spencer
Faallo ku saabsan Spencer
Spencer Xirfadaha la xiriira
MJ Registry Watcher – barnaamij softiweer ah oo lagu kormeerayo laguna sheegayo jiritaanka trojans-ka furayaasha, qiimayaasha diiwaangelinta, faylasha biloowga, iyo goobaha diiwaangelinta kale ama faylalka nidaamka.